Wararkii ugu danbeeyay ee Garowe | allsaaxo online
Wararkii ugu danbeeyay ee Garowe
Published on August 2, 2018 by admin mahamuud · No Comments
Waxaa magaalada Garowe ee caasimada Puntland goor dhow ka furmay shir labba geesooda oo ay yeelanayaan gollaha wasiirada Dawlada Federaalka ee Soomaaliya iyo golaha wasiirada Puntland.
Shirka Hore oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee wasaaradda maaliyada Puntland ayaan si dhaba loo ogayn waxa looga hadli doonaan, hase ahaate waxaa la filayaa inay ka doodi doonaan xiriirka iyo wada shaqaynta Dawlada dhexe ee Soomaaliya iyo Puntland, waxaana shirka oo hadda Socda ay saxaafaddu ka tahay mid dib joog ah sida ay soo sheegayaan wariyeyaasheena Garowe.
Marka uu shirkaasi soo idlaaddo isla Garowe waxaa ka qabsoomi doona shirka khamiislaha ee gollaha wasiirada Dawlada
Federaalka Soomaaliya oo shirkaas kaga hadli doona shaqooyinkoodii caadiga ahaa ee ay kaga doodi jireen shirarka khamiislaha ee ay todobaad walba yeeshaan.
Shirarkan ayaa kusoo aadaaya kadib khilaaf meel sare gaaray oo soo kala dhex galay Dawlada Federaalka iyo Puntland kadib markii raisul wasaare Xassan Cali Khayre uu ka gaab-saaday inuu qayb ka noqdo dhagax dhiga dekadda degaanka Garacad, wuxuuna khilaafkaasi sababi gaaray inuu maanta baaqdo shirarkan qorshaysnaa.
Waxaana khilaafkaan dartiis uu sababay iney xalay baaqatay Xafladda sanadguurada Aas aaska Puntland, taas oo lagu balansana inuu ka qeybgalo Re’iisul wasaaraha Somaliya Xasan Cali kheyre, Kaas oo maalmahan ku sugnaa deegaanada Puntland
Gelinkii dambe ee shalay waxaa magaalada Garoowe gaaray inta badan wasiirada Xukuumadda Federaalka oo uu hoggaaminayey ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed.
Waa shirkii Saddexaad oo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ku yeelanayaan meel ka baxsan magaalada Muqdisho.
Horey waxay wasiirada ugu shireen magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo oo ka kala tirsan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
13 bishii July ee Sanadkii hore ayey ahayd markii kulanka Golaha Wasiirada lagu qabtay Magaalada Kismaayo ee
xarunta KMG Maamulka Jubbaland.